Golis Gaalkacyo oo lagu soo kordhiyay qayb cusub, (Sawirro). – Radio Daljir
Diseembar 13, 2012 5:31 b 0
Gaalkacyo, 13-Dec- Shirkadda Golis xarunteeda Gaalkacyo ayaa maanta xariga laga jaray qaybta Iibka iyo Adeegga bulshada, munaasabaddii xarigaga laga jaray qaybtaasi oo ku bar-bar taal xarunta weyn ee shirkadda waxaa ka qayb galay maamulaha Golis Gaalkacyo, maamulaha guud ee Golis Dr Cali Xaaji Warsame, isimo,maamulka gobolka iyo ganacsatada gobolka qaarkood.
Ugu horayn munaasabadda waxaa ka hadlay maareeyaha Goliska Gaalkacyo Faarax Bootaan Faarax, waxaana uu sharaxaad ka bixiyay furitaanka xafiiskan cusub ee lagu soo biirayay shirkadda Golis xarunteeda Gaalkacyo.
Suldaan C/salaan Suldaan Maxamuud oo ka mid ahaa isimadii ka qayb galay furitaanka xafiiskani ayaa wax yar ka taabtay muhiimadda shirkadani bulshada ay u leedahay isagoo dhanka kalana talooyin u soo jeediyay masuuliyinta Shirkadda.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jamac ayaa isaguna dhankiisa baaq u diray macaamiisha Shirkadda kaasoo uu ka dalbadanayo? inay maanka ku hayaan? adeegyada lagama maar-maankaa ee ay u hayso bulshada , isla markaana ay xiriir wanaagsan wada yeeshaan macaamiisha iyo shirkadda Golis.
Ugu danbayntiina Maareeyaha guud ee Shirkadda Golis Telecom Soomaaliya Dr, Cali Xaaji Warsame ayaa balan qaad ku aadan hormarinta adeegyada shirkadda u sameeyay macaamiisha isticmaasha, isla markaana masuuliyinta Golis xarunteeda Mudug ku booriyay inay muhiimad gaara siiyaan fal-celisyada ka imaanaya macaamiisha, wuxuuna xusay inay masuuliyad weyn iska saarayaan lacagta sahalkaa ee ay bulshadu leedahay ayna damaanad qaadayaan amaanadeeda.
Qaybtan cusub ee maanta shirkadda Golis xariga ay ka jartay lagana daah furay xarunta shirkaddu ay ku leedahay Gaalkacyo ayaa la filayaa inay wax badan ka badasho cabashada iyo adeegga bulshada.